Muslimiinta Burma oo Sadex Sano Loo Diiday Guurka!!!
Muslimiinta Lagu Dhibaateeyey Burma...
"Dhibaatada lagu hayo dadka Muslimiinta ah ee ku nool dalka Burma oo waxaa kamid ah in loo diido waraaqaha dhalashada, lagu cadaadiyo in aysan safri karin iyo in laga xanibo guurka waxay ku mutaysteen Diinta Islaamka oo ay haystaan" Sidaas waxaa qoray ururka Zakat Foundation.
Burma waa dal ku yaal Koonfur-Bari Aasiya, waxana dhinac kaga xeeran badda loo yaqaan Andaman iyo khooriga Bengal. Waxaana xad wadaagaan dalalka Bangladesh, China, India, Laos, iyo Thailand.
Gobolka Arakan (ee Burma) waa gobol taariikh dheer ku leh Islaamka, waxaa la weriyey in saxaabigii Abuu Waqaas (RC) uu tegey gobolkaas sannadkii 618 A.D. Kaddibna ay tageen Muslimiin badan. Ugu dambayntiina markey taariikhdu ahayd 1430 waxa gobolkaasi noqday gobolka Islaamku xoog ku leeyahay kaddib markii uu qabsaday Sultan Caladdin Muhammad (Banga), kaddib markii uu jebiyey Buddhista-yaashii Burma. Waxaana gobolkaas isaga dambeeyey xukunka 48 Sultaan oo Muslimiin ah.
Sannadkii 1982 ayaa xukunka Militariga Burma ee uu madaxda ka yahay Ne Win waxa uu dhalashadii Burma ka xayuubiyey dadka Muslimiinta ah ee deggan gobolka Arakan. Waxaana lagu dhawaaqay in Muslimiinta Arakan ay yihiin dad aan dal lahayn. Arrintaas oo noqotay meesha ay ka bilabatay ciqaabta ugu daran ee lagu hayo Muslimiinta Burma.
March 15, 1997 ayaa Buddhistayaal qamaamsani waxa ay burburiyeen 12 Masaajid oo ku yaal magaalada Mandalay, waxaana la dhaawacay Muslimiin farabadan, kaddib markii suuqa lagu faafiyey sheeko kutiri kuteen ah oo ah in Muslim uu kufsaday gabar Buddhist ah oo dhawr iyo toban-jir ah. Shan maalmood ka dib isla madaxweyntii Budiistaha ayaa burburriyey afar Masaajid oo ku yaal magaalo ku dhow magaaladii masaajida badan laga burburiyey, waxayna isku dayeenin ay galaan Masjidka Jaamaca iyo 12 masaajid oo kale iyadoo salaad Jimce lagu tukanayo, laakiin baqdin ay ka baqeen Allahu Akbar kasoo yeereysey ayey iskaga laabteen.
Magaalooyin badan ayaa laga mamnuucay in aan Muslimiintu geli karin, waxaana laga dhacay maalkoodii, guryohoodiina looga saaray dad Buddhiste ah.
Haddaad Daawato ama daalacato ama aad dhagaysato Saxaafada aduunka ee kala duwan, malayaabi lahayd hadii aad maqasho in guurka loo diiday casrigaan aan joogno dad inaga oo kale ah, waxaa lagu soo daabacay website-ka Islamtoday.net in dad islaama guurka loo diiday laguna hayo dhibaato kale taasoo sababi karta inay sinadu ku faafto, cawaaqib xumadeedana ay la kulmaan, inay dhamaadaan ama ay ka diciifaan diintooda dhibaatada soo gaaraysa daraadeed amaba ay mudo dheer kusoo jireen iyadoo Aduunku iyo Muslimiintuba ka dhaga la yihiin.
Sidaan ayuu qoraalkii uu daabacay islamtoday.net isagoo turjuman waa kan::
Muslimiinta Burma oo sadex sano loo diiday Guurka!
Waxay sii waddaa Xukuumadda Buudistaha ah ee Burma ciriiri galinteeda daran ee ay Muslimiinta kuhayso.
Magaalada Arakan waxay soo saartay xukuumadda Buudistaha go'aan guurka loogu diidayo sadex sano Muslimiinta, ilaa uu kayaraado taranku sinaduna dhexdooda ku faafto, Xukuumadu waxay u dajisay shuruud adag Muslimiinta guurkooda mudo toban sanadood ah, ilaa ay gaartay inay Laaluush badan bixiyaan si guurka loogu ogolaado..!!
Sida ay horay u go'aamisay xukuumada Buudistuhu diidmada Muslimiinta inay dhamays tirtaan waxbarashada, iyagoo aan loo ogolayn inay galaan Jaamacaadka, Macaahida Sare, sida aan loogu ogolayn inay dibada wax kusoo bartaan.
Waxay uga dan leedahay xukuumada Burma arintaan inay faafto jaahilnimada iyo indha la'aanta Muslimiinta laqasbay dhexdooda, ilaa ay ka noqdeen kuwa ka danbeeya dhinac kasta, kaas oo sahli kara inay ka dabar go'aan wadanka.
waxay sii wadaa Xukuumada Buudistaha ciriirigalinta dhaqaalaha ee Muslimiinta, iyadoo kor loo qaaday qiimaha waxyaabaha nolol maalmeedka ah ee aan laga maarmi karin si aan caadi ahayn magaalooyinka Muslimiinta, arintaasina waxay keentay xaalad adag oo sababi karta Macaluul.
Dhinaca kale xukuumadu waxay hirgalisay Mashruuc dadka Muslimiinta ah xoog loogala wareegayo dhulkooda iyo inay u cayrisay cadad badan oo Mulimiinta ah wadanka dibadiisa, sida' Bangaladhaysh, Tayland, Malaysiya, Pakistaan iyo Sucuudiga, dadkaas oo lagu qadaray tiradooda 2,000,000 (laba millyan) oo muslim ah.
Waxaa lagu qiyaasaa dadka Muslimiinta ah oo kunool Arakan iyo Burma 10,000,000 (toban Millyan). Guud ahaan tirada dadka ah ee ku dhaqan Burma waxaa lagu qiyaasay 42 millyan.
Akhri warbixinta:: The Report of Arakan / Burma
Tarjumadii: SomaliTalk.com | Sept 19, 2005